Dagaal xoogan oo kasocda Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dagaal xoogan oo kasocda Muqdisho
Waxaa goordhaw dagaal u dhaxeeya ciidamo katirsan kuwa xasilinta Xamar iyo ciidamo kale oo hubeesan uu ka bilowda Xaafada lagu magacaabo Haanta Dheer oo ku dhaw agagaarka Isgooska Ex-Conarol Afgooye ee magaalada Muqdisho.
Dagaalka ayaa la isku adeegsanaya hubka kala duwan, waxaana halkaasi gaaraya gurmado kala duwan ay helayaan labada ciidan ee saakay ku dagaalamaya Halka loo Yaqaan Haanta Dheer oo katirsan Degmada Dayniile .
Sida aan Wararka ku heleyno dagaalka ayaa bilowday kadib markii Ciidamada Xasilinta isku dayeen in hubka ka dhigaan nin hubeesan, waxaana raga hubeesan ee la dagaalamaya ciidanka Xaslinta qaarkood dusha sare ka fuuleen Haanta Dheer.
Dadka degan xaafada uu dagaalku ka socdo ayaa aad u wal walsan, dadka qaar ayaana bilaabay in ay guryahoda ka cararaan si ay uga bad baadaan dagaalka ka socda xaafadooda una dhaxeeya Ciidanka Xasilinta iyo ciidanka kale ee hubeesan.
Xaafada dagaalka ka socdo waxaa ku badan ciidamo hubeesan oo katirsan Milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo kale oo maleeshiyaad ah una aabaabulan qaab qabiileed kuwaa oo halkaas ku dhuunta.